Congo In Focus: Mampahery Ireo Mpianatra Kongôley Amin’ny Alalan’ny Fanaovan-gazetim-Bahoaka Sy Ny Multimedia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2012 9:38 GMT
Anne Medley, mpaka saripika an-gazety sy mpaka lahatsary mipetraka any Etazonia ary ny Hetsika ho an'i Kongô dia namolavola tetikasa fampianarana fanaovan-gazety “multimedia” ho famporisihana ireo mpianatra Kongôley amin'ny fitantaràn'izy ireo ny tantarany ho amin'izao tontolo izao. Notaterahina tamin'ny 2010 io atrikasa io ary nasongadina tao anatin'ilay vohikala ‘Congo In Focus” ireo zava-bita avy tamin'izany.
Ny mpaka sary fanadihadiana sosialy sy mpiara-nanangana ny Bridges to Understanding, Phil Borges dia manazava ny traikefan'i Anne ao amin'ny bilaoginy:
Nandritra ny telo volana aho dia nampianatra ny fanaovan-gazety “multimedia”, an-tsary sy feo — fakàna sary, feo sy lahatsary — ho an'ireo mpianatra ao amin'ny Fifandraisana izay mianatra any amin'ny Anjerimanontolo Kristiana Mampiasa Tenimpirenena roa ao Congo, na ny Université Chrétienne Bilingue du Congo (UCBC) any amin'ny tanànan'i Beni any Avaratry ny faritanin'i Kivu ho ampahan'ny tetikasa fampianarana fandraisana an-tànana iray antsoina hoe “Congo in Focus.” Maro tamin'ireo mpianatro no tsy mbola nampiàsa fitahirizam-peo na kamera hatramin'izay; vitsy ireo nahalàla ny mikasika ny fanaovan-gazety. Nefa taorian'ireo volana maro nanazarana azy ireo, namokatra tantara an-tsary sy feo tsara momba ny vondrom-piarahamoniny ireo mpianatra.
Matetika loatra, mitatitra mikasika ny ady, herisetra mihatra amin'ny vehivavy, fahantrana sy aretina fotsiny ihany ireo mpanao gazety avy any ivelany any DRC. Amin'ny alalan'ny fanomezana ireo mpianatra any amin'ny Université Chrétienne Bilingue du Congo (UCBC) ireo fitaovana sy paika hitantaràny ny tantara TIANY tantaraina mikasika ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, nahatsapa ho manampy azy ireo amin'ny fampaherezana azy ireo tsy ny amin'ny famborahana ny kolikoly ao amin'ny fireneny ihany fa koa ny fanazavàn'izy ireo ireo zava-tsoa.
Nitondra fanamarihana momba io atrikasa io i Francine Nabintu Murhebwa, mpianatra iray:
Manome ahy ny zavatra nandrasako io fampianarana an-tsary sy feo io. Nanonofy hatrany momba ny fomba hahafahako mivoaka any ivelany mba hanakambana ireo sary sy feo ho fampahafantarana ny olona eran'izao tontolo izao ny zava-misy marina ato amin'ny firenako aho. Heveriko fa izany indrindra no tanjonay amin'ity fampianarana an-tsary sy feo ity.
Taorian'ny roa taona teo ho eo dia nanoratra tao amin'ny PBS Mediashift i Anne Medley:
Ny volana lasa teo, nanoratra tany amin'i Francine Nabintu, iray amin'ireo mpianatro taloha aho, mba hiarahabako azy taminà singana fifidianana nalainy an-tsary sy notateriny ho an'ny PBS NewsHour momba ireo fifidianana farany tao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongô.
Nampatsiahy ahy ny antony mahatonga ahy tia mampianatra any amin'ireo vondrom-piarahamonina tsy be mpisolotena ny valinteniny:
“Nanome aingam-panahy ahy tamin'ny zava-drehetra nataoko ankehitriny ianao. Tsy ho adinoko na oviana na oviana ny famporisihanao anay amin'ny fitenenanao hoe ‘andramo indray.’ Nampianatra anay hahatoky ny tenanay ianao.”
Anne Medley miaraka amin'ireo mpianatra Kongôley. Sary natolotry ny bilaogin'i Phil Borges.
Ny antony nifidianàn'ny NewsHour hanazàva tantara iray izay voatatitra, voasoratra sy azo an-tsarinà Kongôley raha tokony ho ny mpifandray avy any ivelany any Kongô dia teboka famaranana ny fahafenoan'ny fampianarako ny fanaovan-gazety tany Kongô.